ထမင်းအိုး: အအုံး (ခေါ်) ဟင်းပေါင်းထုပ် (ကြက်၊ငါး၊ပုဇွန်)
Posted by မိုးကောင်းသူ at 3:05 PM
Thanks for your dishes. You remind me of myself: I wasn't able to wear my jeans when I come back from every little trips,lol!!!
ကျေးဇူး အစ်မရေ.. ဟင်းပေါင်းထုပ်တွေ လုပ်စားဦးမယ်..
စားချင်လိုက်တာ ဗိုက်တောင်ဆာသွားတယ်.. တကယ်မြင်တာနဲ့ အရသာရှိမှန်းသိသာတယ်.. ငရုပ်သီးစပ်စပ်ဆိုလို့ ပိုသဘောကျတယ်
ငါးအုံးတော့စားဖူးတယ် ကြက်သားနဲ့လုပ်စားကြည့်ဦးမယ် အမရေ...စပ်စပ်မွှေးမွှေးနဲ့ အရသာရှိလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း
ငယ်ငယ်က ရှမ်းပြည်မှာ အဲဒီကြက်ပေါင်းထုပ်ကို ကောက်ညှင်းပေါင်းပူပူနဲ့စားကြတဲ့ ဆောင်းမနက်ခင်းလေးကိုသွားသတိရမိတယ်...။
Moe Moe ရေ
ဖက်ဖယ်ရွက်က အမွှေးအကြိုင်တစ်မျိုးပါပဲ။ ဖက်ဖယ်ရွက်ရယ်၊ ရှမ်းနံနံရယ်၊ ပင်စိမ်းရယ် နောက်ထပ် ဓာတ်ပုံတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
တ၇ုပ်ဆိုင်တွေမှာတွေ့ ပေမယ့်အမည်မသိဖြစ်နေတာ အခုတော့ အဖြေနှစ်ခုရလိုက်တယ်...
☠ seX2Xes ☠ said...
ဟင်းထုတ် ပြုလုပ်နည်း သိချင်ပါတယ်